क्रुसले खुलाए रोनाल्डोसँगको कुराकानी – yuwa Awaj
क्रुसले खुलाए रोनाल्डोसँगको कुराकानी
असार ८, २०७८ मंगलबार 160
एजेन्सी – पोर्चुगलविरुद्ध युरो कपको समूह चरणमा जर्मनीले ४–२ को महत्त्वपूर्ण जित निकालेको थियो । पहिलो खेलमा फ्रान्ससँग पराजित भएपछि जर्मनी पोर्चुगलसँगको खेलमा जित्नै पर्ने दबाबमा थियो । तर, टोलीले आवश्यकता अनुसारकै जित
दर्ता गरेको थियो । खेल पछि एउटा दृश्यले भने धेरैको ध्यान तानेको थियो । पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो र जर्मनीका टोली क्रुसबीच खेलपछिको कुराकानी भएको थियो । जर्मन मिडफिल्डर क्रुसले आफूले इटालीमा के कस्तो भइरहेको
विषयमा सोधेको बताएका छन् । क्रुस र रोनाल्डोलाई रियल म्याड्रिडको स्वर्ण युगको टोलीका सदस्यका रुपमा लिइन्छ । अघिल्लो साता मात्र रियलका अर्का महान खेलाडी सर्जियो रामोसले क्लब छाडेका थिए । ‘मैले उनीसँग ४ सिजनसँगै
खेले । हामी ड्रेसिङ रुपमा हुँदा केहि अत्तालिएका जस्ता थियौं । उनलाई फेरि देख्न पाउँदा खुसी लाग्यो,’ रोनाल्डोसँगको भेटपछि क्रुसले भने, ‘हामीले खेलका बारेमा छोटो कुराकानी गर्यौं । त्यस्तै आउने खेलका बारेमा पनि चर्चा भयो । मैले
उनलाई शुभकामना पनि दिए । अनि इटालीमा कस्तो भइरहेको छ भनेर पनि सोधें।’ क्रुसले खेल पछि अर्का पूर्व सहकर्मी पोर्चुगलका रक्षक पेपेसँग पछि छोटो कुराकानी गरेका थिए । क्रुस र पेपले पनि रियलमा ३ सिजनसँगै बिताएका थिए ।
‘पेपे पनि उत्कृष्ट खेलाडी हुन् । कहिले काही भने उनी मैदानमा निकै आक्रामक देखिन्थे,’ क्रुसले भने, ‘त्यो त्यति राम्रो देखिन्न थियो । तर मैदानमा उनी उत्कृष्ट थिए । जस्तो रोनाल्डो पेपे पनि त्यस्तै हुन् ।’
Prevचापाकोटको नीति तथा कार्यक्रम : हवाइ मैदान निर्माणदेखि कृषि र पर्यटन प्राथमिकता
Nextअन्तिम खेलअघि नै फ्रान्स र इंग्ल्यान्डसहित चार टिमको अन्तिम १६ मा स्थान पक्का
६.	एमाले फुट्न कति चाहिन्छ संख्या ? (272)